တချို့အဆင်းလှ တချို့အဆင်းမလှ – Pann Satt Lann Books
5.4 x 0.4 x 8.2 inches
တချို့အဆင်းလှ တချို့အဆင်းမလှ အား ဝေဖန်သုံးသပ်မှု4ရှိပါသည်။
Pinnochio She – September 6, 2020
ဆရာမ နုနုရည်(အင်းဝ)ရဲ့ ‘တစ်ချို့ကအဆင်းလှ တစ်ချို့ကအဆင်းမလှ’ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးဖတ်စေချင်ပါတယ် ဇာတ်ဆောင်အမျိုးသမီးငယ်၃ယောက်ရဲ့ ဘဝခရီးလမ်းတစ်လျှောက်ကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲ ပင်ပန်းဆင်းရဲမှု နာကျင်ဝမ်းနည်းမှုတွေကို ဖတ်တဲ့သူဝင်ရောက်ခံစားမိအောင်ရေးဖွဲ့ပေးထားပါတယ် ဒီထဲကအမျိုးသမီးငယ်သုံးယောက်ကြုံတွေ့ရတဲ့ဘဝခရီးလမ်းကြမ်းဟာ အပြင်မှာလဲလူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ ဘဝအကြောင်းတွေပါ ဒီအခက်အခဲ ဝမ်းနည်းမှုတွေကိုကြုံတွေ့ပြီးဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရသလဲဆိုတာကို စာဖတ်သူကိုယ်တိုင်ဝင်ခံစားမိအောင်ကိုအရေးအသားရော ပညာပေးပုံရောအရမ်းကောင်းပါတယ် ဒါကြောင့်ဖတ်ကြည့်ပေးကြစေချင်ပါတယ်
Wai Phyo Thant Sin – November 21, 2020
Book review2for week 2
ဒီတပတ်အတွက် ဖတ်ချင်လို့ ဖတ်လိုက်တဲ့စာအုပ်လေးကတော့.. ? ခုတလော book review တွေလည်း မကြာခဏတွေ့ရတဲ့
နုနုရည်အင်းဝရဲ့ တချို့အဆင်းလှ တချို့အဆင်းမလှစာအုပ်လေးပါ..
ဖတ်ချင်သွားတာကတော့ စာအုပ်ရှေ့ဆုံးမျက်နှာက စာလေးကြောင့်ပါ…
…..ထိုအခါ ကမ္ဘာဦးသူတို့သည် ရသပထဝီကို စားကုန်၏။
ထိုသူတို့တွင်(အချို့) အဆင်းလှသော သူတို့သည်
ထိုသို့ပြုကုန်သည်ရှိသော် ရသပထဝီ မြေအရသာတို့သည်
အေးမာသီ- ကလေးစိတ်မပျောက်တဲ့ အစားပဲမက်မောတတ်တဲ့ ဖတဆိုးမိန်းကလေး.. အစားနဲ့ ဓာတ်ရှင်ပဲမက်တဲ့ မရင့်ကျက်တဲ့ကလေးဆိုးပေမယ့် လောကကကျီစယ်ခဲ့လို့ မိန်းမပျက်ကလေးဖြစ်ရရှာသူ…။
မမြအိမ်- အရှူံးပေးရင်နှလုံးအေးတယ်လို့ လက်ကိုင်ထားတတ်သူ အရမ်းအေးလွန်းတဲ့ မိန်းကလေး.. အေးလွန်းလို့ပဲ လောကကြီးရဲ့ အနိုင်ယူမှုတွေသာမက မိသားစုရဲ့ အနိုင်ကျင့်မှုကို ခံရရှာသူ…
ကံကောင်းလို့ ယောကျာ်းကောင်းလေးတွေ့ခဲ့ပေမယ့် ကျီစယ်တတ်လွန်းတဲ့လောကကြီးကြောင့် ကလေးတို့အမေ မုဆိုးမလေးဖြစ်လာတဲ့သူ။
မစူး- စိတ်မမှန်တဲ့ဖခင်ရဲ့သွေးကို အမွေရထားတဲ့ ကျပ်မပြည့်ရှာပေမယ့် ချစ်တတ်သူကြီး… ကိုယ့်ကို တစက်မှ မချစ်သူနဲ့မှ တညတာမှောက်မှားခဲ့ရင်း သမီးလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အမေဖြစ်လာသူ… အကျည်းတန်တဲ့နှလုံးသားတွေကြောင့် မိဘတွေကိုပါ ဆုံးရှူံးရရင်း လောကအလယ်မှာ ကျပ်မပြည့်ရှာတဲ့ကြား တကောင်ကြွက်ဘွဲ့ပါတိုးလာတဲ့သူ။ ကျပ်သာမပြည့်တယ် သတ္တိတော့မခေသူမိန်းမ။
သူတို့သုံးဦးရေစက်ဆုံလာခဲ့တာတော့ လေလွင့်ပျက်စီး၊ အုပ်ထိန်းသူမဲ့၊ စာရိတ္တပျက်ပြား၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါး အစရှိသူတွေကို ထိန်းသိမ်းရာ အမျိုးသမီးဂေဟာ… သုံးယောက်သား အဲ့ဒီကနေ အမြဲလွတ်မြောက်ချင်ပေမယ့် လွတ်မြောက်ရဲ့လား… ဘာကြောင့် လွတ်မြောက်ချင်ကြတာလဲ…
သူတို့ဘာကြောင့် အဲ့ဒီကိုရောက်ခဲ့ကြသလဲ။ ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြသလဲ… သိချင်ရင်တော့… တစ်အုပ်မှ ၃၅၀၀ ထဲပါနော်..
နုနုရည်အင်းဝကို စပြီးရင်းနှီးခဲ့တာတော့ ဆရာမရဲ့ masterpiece “ပြုံး၍လည်းကန်တော့ခံတော်မူပါ ရယ်၍လည်းကန်တော့ခံတော်မူပါ”နဲ့ပေါ့… ကိုယ်က masterpiece မှစပြီးကိုင်မိတော့ နောက်စာအုပ်တွေတော့အရသာခပ်ပေါ့ပေါ့ဖြစ်သွားတယ်။
“အမှတ်မရှိလမ်းမရှိ ကီလီဗောတံတား” လည်း အဲ့လိုပဲ။
ဒါပေမယ့် ဆရာမရဲ့စာပေတွေကတဆင့် ကိုယ်တို့တွေ မမြင်နိုင်တဲ့ အခြေခံဘဝတွေဆီရောက်ခဲ့တယ်။ ကိုယ်တို့မတွေးဖူးတဲ့ သူတို့ရဲ့ဒုက္ခတွေကို သိခွင့်ရခဲ့တယ်။ ဘဝဟာ အမြဲတမ်းမတရားတတ်တာကို မှန်းဆမိခဲ့တယ်…. ဒီစာအုပ်လေးရဲ့ အဆုံးသတ်လေးကတော့ happy ending မဟုတ်လောက်ဘူးလို့ တွက်ဆခဲ့တဲ့အတိုင်း ရင်ထဲမှာမွန်းကျပ်ပြီး ကျန်ခဲ့တယ်။ ဘဝဟာ တကယ်ပဲ အပြဌာန်းခံပဲလား… အတိတ်အကြောင်းတလွှာရဲ့ အဆက် ပစ္စုပ္ပန် အကျိုးတလွှာကြောင့်ပဲလား… အဆုံးထိတွေးဖို့ ဉာဏ်မမီတော့ပေမယ့် ဒီစာအုပ်လေးဟာ ဖတ်လို့ကောင်းတဲ့ ရသစာအုပ်လေးတစ်အုပ်ဖြစ်ပါတယ်..
Yi Wai Oo – November 22, 2020
အစားအသောက် ကောင်းကောင်းစားချင်တာကလွဲရင် ဘာကိုမှစိတ်မဝင်စားတဲ့ “အေးမာသီ”
(ငယ်ငယ်ကတည်းက ကိုယ့်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ အကျိုးဆက်ကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူရမယ်လို့စွဲလာတဲ့ တယူသန်အစွဲကြောင့်
ဒီစာအုပ်ကို ဖတ်နေပေမယ့် သူတို့သုံးယောက်ရဲ့ဘဝကို စာအုပ်ရဲ့နောက်ဆုံးအခန်းကိုမရောက်ခင်ထိ မစာနာတတ်ခဲ့ဘူး
ဒါပေမဲ့ ဇာတ်သိမ်းမှာတော့ ဝယ်မိတာ မမှားဘူးဆိုတာသိလိုက်တယ်
ကိုယ့်အတွက်ကတော့ ဇာတ်သိမ်းက ဝမ်းနည်းစရာကောင်းလွန်််််််းပါတယ်
မတင်နွဲ့နွဲ့နိုင် – December 23, 2020
ကိုယ်က အစကတည်းကဆရာမနုနုရည်ရဲ့fanပါ။ဆရာမရဲ့ဇာတ်လမ်းအားလုံးနီးပါးကhappy endingမဟုတ်ပါဘူး။အမြဲတမ်းဇာတ်နာပါတယ်။လုပ်ကြံဇာတ်တွေလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူး။လက်တွေ့ဘဝ လူ့လောကကြီးထဲမှာ အမှန်တကယ်ရှိတဲ့ အခြေခံလူတန်းစားအများစုရဲ့ရှိတတ်တဲ့ဇာတ်အမှန်လေးတွေပါ။စာအုပ်တိုင်းကိုဖတ်လိုက်ရင် ရင်ထဲမှာအမြဲတမ်းစို့နင့်ပြီးကျန်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါ‌ေပမယ့်အကျိုးရှိတဲ့စာအုပ်‌ေတွဖြစ်လို့မဖတ်ဘဲလည်း မနေ‌နိုင်သူပါ။ဒီစာအုပ်လေးဟာဆိုရင်လည်း မိန်းကလေးသုံးယောက်အကြောင်းကို အ ခြေခံထားပြီးအတုယူစရာ၊အသည်းယားစရာ၊အားမလိုအားမရဖြစ်မှု၊စသည့် ရသပေါင်းများစွာကိုပေးနိုငိပါတယ်။အမျိုးသမီးဂေဟာကိုအကြောင်းအမျိူမျိုးနဲ့ရောက်လာကြတဲ့မိန်းကလေးသုံးယောက်အကြောင်းကိုသိလိုက်ရတော့ သနားစရာ၊ဒီဂေဟာကိုရောက်လာတော့စိတ်ဆင်းရဲကြရပံု၊ထွက်ရခက်တဲ့ဒီနေရာကနေနည်းမျိုးစုံသုံးပြီးကြိုးစားကြပုံ၊ထွက်ခွင့်ရလို့အပြင်လောကရောက်‌ တော့ဝမ်းသာမယ်မှမကြံသေးစာရေးသူရဲ့ဇာတ်အလှည့်အပြောင်းတွေကစာဖတ်သူရဲ့ရင်ကိုနိမ့်လိုက်မြင့်လိုက်နဲ့ဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းလွန်းပါတယ်။အဆုံးထိဖတ်ပြီးချိန်မှာတော့ ရင်ထဲမှာတနုံ့နုံ့အတွေးများစွာနဲ့ပေါ့….
သောက်တော့ ဒူးယား၊ နေတော့ ချုံကြား၊ ဝတ်တော့ မလေးရှား
ဗိုလ်ကေတထောင်မှာ တစ်ယောက်လောက်တော့ ဇွဲကောင်းပါရဲ့
အမှတ်မရှိ၊ လမ်းမရှိ၊ ကီလီဗောတံတား